Ngokushesha usungakwazi ukuvula i-Mac yakho usebenzisa i-Touch ID ku-iPhone yakho | Ngivela kwa-mac
Ngokushesha usungakwazi ukuvula iMac yakho usebenzisa i-Touch ID ku-iPhone yakho
UJesu Arjona Montalvo | | iPhone, Amakhompyutha we-Mac
I-Apple ingahle ithuthukise indlela yabanikazi be-iPhone yokwengeza okungaphezulu ukuphepha ku-Mac yakho sibonga i-iPhone yakho. Umbiko oshicilelwe ngu 'MacRumors' muva nje ithi kusibuyekezo esizayo se- I-OS X 10.12 kungaba yilowo ozongenela ukhetho. I-Apple izama nomqondo wokuvumela abanikazi bamaMac nama-iPhone ukuthi bakwazi vula i-Mac yakho nge-Touch ID ku-iPhone. Kube namahlebezi okuthi i-Apple ingahlanganisa Thinta i-ID ku-MacKepha uma lo mbiko uliqiniso, i-Apple izothembela ku-iPhone ukusebenzisa inzwa yezigxivizo zeminwe ukukunikeza izinketho ezahlukahlukene.
Umbiko uthi onjiniyela be-Apple manje basebenzela isici sokuvula esivumela umnikazi wefayela le- iPhone uvule i-Mac yakho ngokumane ngokuthepha umunwe wakho ku-Touch ID sensor. I-iPhone kuzodingeka ibe ngaphakathi kokuthize Ukusondela kwe-Mac ukusebenza kahle, yize kunamahemuhemu okuthi uma zixhunywe ku-linethiwekhi efanayo ye-wifi ingasebenza. Umsebenzi kuthiwa usebenza kusuka kufayela le- I-Bluetooth LE.
Umbiko wengeza ukuthi i-Apple ingasebenzisa i-Apple Watch ngendlela efanayo naku- ividiyo ukuthi sikushiya ngaphezulu, noma ngabe i-iPhone ingekho. Lokhu sikubonile sisebenza nyakenye nge I-Apple Watch y OS X, ngohlelo olubizwa ngokuthi Knock, Knock. Ngayo, umnikazi we-Apple Watch, nohlelo lokusebenza olufakwe kahle, ungafinyelela iMac yakho nge-Apple Watch.
Le ndlela ye- kuvulwa isinyathelo esisodwa kwezokuphepha, zingasetshenziselwa ukusebenza kwe- Apple Pay amahemuhemu amaningi. Ngokuqinisekiswa kwegama le- I-ID yokuthinta, umuntu umane athinte inzwa yezigxivizo zeminwe ukugunyaza ukuthenga okwenziwe kwi-Mac yabo.
Umbiko uphawula ukuthi izici zisathuthukiswa I-OS X 10.12, futhi bakubonile ukukhanya kule OS X yakamuva, kepha bayangabaza ukuthi kuzofika ngesikhathi. Futhi kubikwa ukuthi esinye isici esihle se-OS X yilokho ISiri ingakhiwa ku-OS X 10.12 Udla kanjani? Ngikubhalele kulokhu isihloko.
Ungathanda ukusebenzisa i-Touch ID ku-iPhone yakho ukuvula iMac yakho?. Kungaba wusizo kuwe?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » iPhone » Ngokushesha usungakwazi ukuvula iMac yakho usebenzisa i-Touch ID ku-iPhone yakho
Lezi zindaba zivela namhlanje? Sengikwenze isikhathi esingaphezu konyaka
Manje amahemuhemu asezwakala kakhulu kunakuqala. Sanibonani u-Unai.
Ngikuthola kuwusizo olukhulu, okusebenzayo, njengamanje kunezindlela eziningi zokukwenza ngezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene kepha zonke zisebenzisa ibhethri eliningi kakhulu, ngiyethemba ukuthi lapho kuhlanganiswa ngokwendabuko lokhu akwenzeki
I-infuse ifaka umbono weLabhulali nokunye okuningi
ICarPlay izofika kwezinye izinhlobo zeBMW futhi ngaphandle kwentambo